Vahaolana TipTop | mandimby maharo
Posted on 11 September 2012 by Mandimby Maharo
Na dia efa mitangorona ao Betroka avokoa aza ireo tafika mpampandry tany omaly dia mbola nahitana fanafihan-dahalo 2 ihany ny alina. Tena sahy ary mihantsy ady mihintsy ny fandraisan’ireo manam-pahefana izao fihetsika izao.
Io fidinana any an-toerana io manko no hitan’ireo be galona fa mety hampilamina amin’izay iny faritra atsimo iny. Saingy ny fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny maro dia ny hoe mandram-pahoviana no hijanona ao ireo miaramila an-jatony ireo? Sa ve rehefa mangingina tsy milaza ity resaka ity intsony ny mpanao gazety malagasy sy iraisam-pirenena dia hody any an-dakazerina indray? Mitebiteby araka izany ireo mponina satria dia matahotra ny hisian’ny valifatin’ireo dahalo. Toy izany koa ireo fanampiana entin’ireo mambra ny governamanta sy ny avy ao amin’ny Fat. Mba hisy amin’izay ve ny fijerena ny fiainana andavanandron’ireo mponina ireo.Satria raha ny faritra atsimo no resahana dia misedra olana lava: eo aloha ny valala izay mandrava isan-taona ny voly, eo koa ny hain-tany izay tsy mahavanona ny fiompiana sy ny sisa. Iarahana mahalala nefa fa na iza na iza no nitondra teto dia natao fitaovana nakana ny vatom-pifidianana hatrany ny fampanantenana ny hamahana ireo olana ireo.
Manahy ary arak’izany ireo mponina ireo sao ka mbola ho atao fitaovana indray ity resaka dahalo ity amin’izao ankatoky ny taona anaovana ny fifidianana izao.
Efa nahazatra tamin’ity tetezamita ity rahateo ny fanomezana vahaolana tampin-kenatra fotsiny. Raha misy ny mitokona nitaky ny zony dia fanampahan-karama no vahaolana. Raha nisy ny tsy fandehanan’ny fampianarana dia ny fanamorana ny fanadinana no vahaolana. Raha nisy ny tsy fanana-ko hanin’ny mponina dia ny vary mora no vahaolana. Ary raha nisy ny tsy famahana ny olana ara-politika dia natao avokoa ireo karazana fihetsiketsehana rehetra ity nefa toa tsy nankaiza akory… Ireo vahaolana reo izay toa afo mololo ihany ka tsy maharitra andro vitsy, volana vitsy dia miteraka olana hafa indray.
Oviana ary isika vao ho sahy hijery ny tena fototry ny olana ka sahy hamotsitra ny vay ka hitady ny tena fanafody hanasitrana ny ao atsimo ao, sy ny malagasy rehetra?